Fumana Uncedo Ukuyeka - 802Quits
Ikhaya » Iivenkile » NDIFUNA UKUYEKA » Fumana Uncedo Lokuyeka
FUMANA UNCEDO UKUYEKA
Iindlela ezilungiselelwe wena neziguqukayo zokuyeka kubahlali baseVermont.
Zininzi izinto onokuzenza ukuphucula amathuba akho okuyeka ngempumelelo icuba, i-e-cigarettes okanye ezinye iimveliso zecuba. Ukusebenza neVermont Quit Partner okanye Quitline Coach ngo-1-800-QHUBA-NGOKU kwandisa amathuba okuyeka ngempumelelo, ngakumbi xa kudityaniswe nokuyeka amayeza. Kungenxa yoko le nto inkqubo yokuyeka nganye inikezela Iipatches SIMAHLA, intlaka kunye neeloshini kwaye ikunceda ukuba wakhe isicwangciso sokuyeka esenziwe ngokwezifiso. Ukuba ukhe wazama umendo ngaphambili owawungasebenzi, cinga ngokuzama enye.
Njengoko ucinga ngokuyeka ukutshaya, ukuphuma okanye enye icuba, ngaba uyazibuza ukuba loluphi uhlobo lwenkxaso eyongezelelweyo olungeleyo? Nantsi into onokuyilindela kuhlobo ngalunye lokuyeka ukunceda.
FUMANA UNCEDO UKUYEKA; BHALISA NGOKU:
Ukhulelwe okanye umama omtsha?
Fumana uncedo lwasimahla lokuyeka ukutshaya kunye nelinye icuba lakho kunye nosana lwakho.
Fumana uNcedo lwaSimahla>